2011-07-31 ~ Myanmar Express
KIA အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သောက်ပေါဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်
တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံမှာ လေအေးပေး စနစ်များ ပြုပြင်ပြီး ပြန်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လူ ၇ ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ် ။ သေဆုံး သွားသူတွေထဲမှာ ဒုရဲအုပ်တစ်ဦး ပါဝင်ပြီး ကျန်တဲ့ သူများဟာ အရပ်သား ပညာရှင်များ၊ ယာဉ်မောင်းများနဲ့ တရုတ် စကားပြန်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင် ၅ ရက်မှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အတွက် အိပ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် " KIA ရဲ့လုပ်ရပ် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုေ-ာက်ပေါကြီး ဖြစ်စေတယ် " လို့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုကြပါတယ်။ NLD နဲ့ နီးစပ်သူများကလည်း အပြစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘာမှမလုပ်နိုင်သလို ၊ သူဝင်လုပ်တာကိုလည်း ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ အပြန်အလှန် နားထောင်ကောင်းမယ့် စကားလေးတွေပြောပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြမှာပဲဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာပြီးတာ ၉ လ နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဘယ်နေရာမှ ဝင်မဆံ့ခဲ့သလို ဘယ်မှလည်း ဖြစ်ဖြစ် မြောက်မြောက် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ စီမံကိန်းကြီးလည်း ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်း မျက်နှာသေနဲ့ မအိမသာ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့တဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာကိုလည်း KIA က ဥပက္ခာ ပြုကာ ၅ ရက်အကြာမှာ ထင်တိုင်းကြဲခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျဉ်းကျခံစဉ်က မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးထားခဲ့သူတွေကလည်း မျက်လင့်ချက် ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ "NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ စာရွက်ပေါတိုင်း ကြေငြာချက် တွေ၊ အိပ်ဖွင့်ပေးစာတွေ ထုတ်နေရုံနဲ့ မပြီးပဲ အဲဒီ ကြေငြာချက်နဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာက ဘယ်လောက်ထိ သက်ရောက်မှုရှိသလဲ၊ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ က ပိုအရေးကြီးပါတယ် " လို့ ဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့် နော်ဝေနိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူ တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ စစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ကချင် ဒုက္ခသည်တစ်ဦးကတော့ "အန်တီစုက စစ်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ အတိဒုက္ခရောက်နေလို့ အပြန်အလှတ် ပစ်ခတ်မှုတွေကိုရပ်စဲဖို့ အိတ်ဖွင့် ပေးစား ပေးတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပြီး မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ခုတော့ အိတ်ပိတ်လည်းမရ၊ အိတ်ဖွင့်လည်း မရ၊ အန်တီစုလည်းေ-ာက်ပေါဖြစ်တယ်၊ KIA အနေနဲ့ အန်တီစုကို ခုလိုေ-ာက်ပေါကြီး ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ဘူး " လို့ ပြောပါတယ်။"အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် အသက် ၂၀ ကျော်ငယ်တဲ့ ရင့်လတ်ရှင်နာဝပ် က တောင် တစ်နိုင်ငံလုံးကို အာဏာ တည်ဖို့လုပ်တော့မယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာလေးမှာတောင် အာဏာတည်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ အရည်အချင်းက အရမ်းကွာလွန်းနေတာပေါ့" လို့ ဘန်ကောက်ရောက် မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ " ဒီ စာတစ်မျက်နှာစာ အိပ်ဖွင့်ပေးစာတောင် လူမလေး ခွေးမခန့်ဖြစ်နေရင် ဒီထက် အရေးပါတာတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ ဘယ်သူက ယုံကြည်မှာလဲ" လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက် ရက်စွဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့(KIO) ၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(SSA) တို့ကို လိပ်မူပြီး အိပ်ဖွင့်ပေးစာ အေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး။ အဲဒီ ပေးစာထွက်ပြီး ၅ ရက်အကြာ သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ အတွက် လူ ၇ ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာ ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Express
ကချင်သောင်းကျန်းသူ KIO, KIA မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မထီမဲ့မြင်ပြုမှု နှင့် မြန်မာပြည်သူများအပေါ် ကြမ်းကြုပ်မှု
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ကေအိုင်အေ မှ တံတား ၁၅ စင်းကျော် ဗုံးထောင်ဖျက်ဆီးမှု၊ ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှု အပြင် အပြစ်မဲ့ ကချင် ပြည်သူများအား စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေမှုများ ရပ်တန့်ရန်အတွက် အစိုးရဖက်မှ ပြည်နယ်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကေအိုင်အေ တို့ ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာပဲ ယခုလ ၂ ရက် အင်္ဂါနေ့ ညနေ ပိုင်း ၅ နာရီ မိနစ် ၂၀ လောက်မှာ ကေအိုင်အေ က အစိုးရ ဝန်ထမ်း ကားတစ်စီးကို မိုင်းခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူ့ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ အပါအဝင် လူ ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်။မိုးမောက်မြို့နယ် ဆန်ဂန်ရွာ အနီး လမ်း ပေါ်မှာ တာပိန် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံ အတွင်း က ထွက်လာ တဲ့ ကားတစီး ဟာ ကေအိုင်အို က ထောင်ထားတဲ့ မိုင်း ကြောင့် ကားပေါက်ကွဲ ပျက်စီး သွား ပြီး ကားပေါ်ပါ လူ ၈ ဦး စလုံး သေဆုံး သွားပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ သူတွေထဲမှာ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဒုရဲအုပ် တဦးလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေး လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ နဲ့ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် တွေကြား ကချင် ဒေသ အတွင်း အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး မှု တွေကို တနင်္လာနေ့နှင့် အင်္ဂါနေ့တွေက ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက် နေ့တုန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကေအိုင်အေ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား သောင်းကျန်းသူအားလုံးနှင့် အစိုးရ ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပေးစာထဲမှာ သူပြောနေကျ ဗမာ နိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုပြီး ရေးသားထားတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း ထား ကြောင်း၊ အားလုံးသည် နှစ်ပရိစ္ဆေဒ များစွာကပင် တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက် အတူနေထိုင် ခဲ့ကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ဖြစ်ကြ ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ အားလုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီး သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးသည် အလွန် အရေးကြီးကြောင်း ၊ ရှမ်း၊ ကရင် နှင့် မွန် စသည့် ပြည်နယ်များတွင် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိ သောကြောင့် သေကြေဆုံးရှုံး ပျက်စီးမှုများ ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည့်အပြင် တန်ဖိုး ကြီးမားသည့် နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အဦများ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၊ ယိုယွင်း ပျက်စီးမှုများ ကြုံတွေ့နေရ ကြောင်း၊ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများလည်း အတိဒုက္ခများစွာ ရောက်နေကြ သည့်အပြင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကိုပါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မည့် အန္တရာယ် ရှိနေကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးသားထားပေသည်။သို့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ပို့ပြီးလို့ ၅ ရက်အကြာမှာပဲ ကေအိုင်အေ ရဲ့ မိုင်းကြောင့် လူ ၈ ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကေအိုင်အေ ရဲ့ လုပ်ရက်က လူအများ လေးစားချစ်ခင် နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငပေါကြီးဖြစ်အောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ကေအိုင်အေ ၏ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒါ့အပြင် ICBL ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အားလုံး လူသတ်မိုင်းအသုံးပြုမှုအား ရပ်တန့်ပစ်သင့်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော မိုင်းအသုံးပြုမှုတားဆီးပိတ်ပင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က (ICBL က ငြိမ်းချမ်းရေးဆုလက်ခံသည့် ပွဲသို့ ပေးပို့လာသော ဂုဏ်ပြုစကားတွင်) ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအား အချိန်အခါသင့်သလို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အမေရိကန်အစိုးရအား မြေမြုမိုင်းအသုံးပြုမှုအား တားမြစ်ရန်အတွက်တောင်းဆိုသော သမ္မတ အိုဘာမားထံသို့ပေးပို့သော တောင်းဆိုချက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တခြား ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ၁၅ ဦးနှင့်အတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ပူးတွဲနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဂျိုဒီ ၀ီလီယံက ယနေ့ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားရာတွင် " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်က ၁၉၉၇ ခုနှစ် မိုင်းအသုံးပြုမှု တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေးသဘောစာချုပ်အပေါ် ဆက်လက်ထောက်ခံပြောကြားပေးနေတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အားလုံး အလွန်ကို အားတက်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအားလုံး မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုနေတာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဟာ အထူးတလယ် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ သဘောတူစာချုပ် စတင်လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးကတည်းက စဉ်ဆက်မပြတ်မိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ တခုတည်းသော တိုင်းပြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါပဲ။" ဟုဆိုပါသည်။" တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ မမြုပ်မိုင်းတွေကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ " ဟု မြေမြုပ်မိုင်းတာဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့လာသော သူမ၏ သတင်းစကားတွင် အထက်ပါအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့သည်။"မိမိရန်သူက စလုပ်လာမှာကို မစောင့်နေဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ရဲ့ စစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ခြင်းကို စတင်ပါလို့ " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်နက်ကိုင်အားလုံးအား တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားသတိပေးပြီးနောက်ပိုင်း ၅ လ အကြာမှာ KIO ရဲ့ မိုင်းကြောင့် လူ ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေ ရဲ့လုပ်ရက်တွေက ဘယ်သူ့စကားမှ လက်မခံပဲ ထင်ရာဆိုင်းနေသလို နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပါ လှောင်ပြောင် သလိုဖြစ်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကချင်သောင်းကျန်းသူများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသည့် ကချင် ဒုက္ခသည်များ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင် က တော့ တဖက်နဲ့ တဖက် တိုက်ခိုက် နေ ကြမယ့် အစား ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း အဖြေရှာခြင်း က ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ Myanmar Express
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအတွက် လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ၁၂ ယောက်မြောက် ကစား သမား၊ ဒီလူတွေ၊ ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်ရဲ့လား??
မြန်မာအလံသစ်ကို အားပါးတရ လွှင့်ထူအားပေးကြပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း တွင် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းသည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဘရာဇီးလ် နိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အာရှဇုန်ခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယ အဆင့် ဒုတိယ အကျော့ ပွဲစဉ်ကို အိုမန်လက် ရွေးစင်အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြသည်။ ပထမ အကျော့အိုမန် အိမ်ကွင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့စဉ်က နှစ်ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သောကြောင့် မျှော်လင့်ချက် သိပ်မရှိတော့ သော်လည်း ကိုယ် မြေကိုယ်ရေတွင် ကစားမည့်ပွဲစဉ်တွင် မြန်မာ အသင်းအတွက် ၁၂ ယောက် ကစားသမားဟုဆို ရသည့် ပရိသတ် အင်အားဖြင့် အံတုမည်၊ နောက် တစ်ဆင့် မတက်သည့်တိုင်အောင် အနိုင် ဆိုသည့် ရလဒ် ကို စွမ်းဆောင် နိုင်လိမ့် မည်ဟု အများက မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ယင်း အတွက် ကြောင့်ပင် ပွဲမတိုင်မီ က တည်းက လက်မှတ် အတုများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ သလို၊ ထိုပွဲတွင် လာရောက် ကြည့်ရှုမည့် ပရိသတ်များ ကလည်း ဟိုတစ်စု၊ ဒီတစ်စုနှင့် သွား မည့်အချိန်ကိုတိုင်ပင်၊ ဟို လူလိုက် မလား၊ ဒီလူ လိုက် မလားနှင့် စုဝေး နေကြသည်။ အားရစရာ၊ အားတက်စရာ ဟုထင်မြင်မိသည်။ ပထမ အဆင့် ခြေစစ်ပွဲတွင် လည်း မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်း ဟာ အဝေးကွင်း မှာ မွန်ဂိုလီးယား အသင်းကို တစ်ဂိုးဂိုး မရှိဖြင့်ရှုံးနိမ့် ခဲ့သော်လည်း အိမ်ကွင်း တွင် ၁၂ယောက်မြောက် ကစားသမား တို့၏ မိနစ် ၉၀ လုံးလုံး မနားတမ်း၊ မမောတမ်း အားပေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် လိုအပ်နေသည့် အနိုင်ဂိုးများ ရရှိခဲ့ပြီး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ယခုပွဲစဉ် အတွက် ၁၂ ယောက်မြောက် ကစားသမားကို အားကိုး ကြသည်။ ယင်း အတွက် ကြောင့်လည်း မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် သည် ပွဲစလျှင် အထူး တန်းကလွဲလို့ ရိုးရိုးတန်း အားလုံးကို အခမဲ့ကြည့် ရှုခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့် တကယ်ပွဲစချိန်မှာလည်း သုဝဏ္ဏ ဘောလုံးကွင်း တစ်ခုလုံး ပြည့်လျှံနေတာ ကိုတွေ့ရသည်။ မြန်မာ့ အသံမှ တိုက်ရိုက်ထုတ် လွှင့်သည့် ဒီပွဲကို ကွင်းလုံးပြည့် အားပေး တာမြင်ရ တော့ အားရစရာ ကောင်းလှသည်။ ၁၂ ယောက် မြောက် ကစားသမားတွေ အင် အားတောင့်တင်း နေ၍ အနိုင်ရလဒ် ကိုတော့ မျှော်လင့်မိ နေကြသည်မှာ မြန်မာတစ်မျိုးသား လုံးဖြစ်နေလိမ့်မည် ဟုဆိုလျှင်မှားမည် မထင်။ တရားဝင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ချက်များအရ ကွင်း အတွင်း ပရိသတ်ဦးရေ သုံးသောင်းခွဲ ကျော်ရှိ သည်ဟုလည်း မြန်မာ့အသံမှ ပွဲ သုံးသပ် ကြေညာ သူ၏ပြောစကား အရသိရသည်။ ပြိုင်ပွဲစတင် ကစားချိန် တွင်လည်း မြန်မာ အသင်းမှ ၀ါရင့် ကစားသမား များဖြစ်ကြသည့် ရန်ပိုင်၊ အသင်း ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့ ခင်မောင်လွင် တို့ အပါအ၀င် လူစုံတက်စုံ ပါဝင်ကြသလို၊ အိုမန် လက်ရွေးစင် အသင်းမှလည်း မြန်မာပရိသတ်များ နှင့်မစိမ်း သည့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှ ၀ီဂန် အသင်း၏ နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားဖြစ်သူ အယ်လ်ဟာစီ လည်း ပါဝင်လာသည်။ ထိုကစားသမား သည် ကမ္ဘာ့ အဆင့်တိုက်စစ်မှူးများ နှင့် ရင်ပေါင်တန်း ကစား နေရသူလည်းဖြစ်သဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ဂိုးသမား များကို မြန်မာ ကစားသမားများက ဂိုးသွင်းယူ လိုက်သည် ကိုမြင်တွေ့လိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဂိုးသွင်း ယူလိုက်နိုင်လျှင် ပင် မြန်မာအသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူ စရာပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းပွဲစဉ်မတိုင် မီက လည်း မြန်မာ့ဝါရင့်အားကစား ကလောင် ရှင်ဖြစ်သည့် အဘဦးခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) ကလည်း အိုမန်ကို အနိုင်ရပြီး ဖြတ်ကျော်နိုင် သည်ဟု ထင်မြင်ချက် ပေးထားသည်ကလည်း အားတက် စရာ ပင်ဖြစ် သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလို ဘောလုံးမနိုင်ရင်လူချမယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြိုင်ပွဲ စသည်နှင့် မြန်မာ အသင်း သည် ကွင်း လုံးပြည့်အားပေးနေသည့်ပရိသတ်များ၏ ကမ္ဘာ မကြေ သီချင်းသံ၊ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည်ဆိုသောတေးသီချင်းများကို သံပြိုင် သီဆိုရင်း ကြားရသူ အပေါင်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ကိုလှုံ့နှိုးစရာ မလိုအောင်ပင် ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထသွားစေနိုင်သည်။ ပြိုင်ပွဲ စသည်နှင့် မြန်မာ ဘောလုံး အသင်းက ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာ စီးရယူဖို့ကြိုးစားပြီး ချေပဂိုး၊ အနိုင်ဂိုးများ ကိုသွင်း ယူဖို့ကြိုးစား ကစားနေသည်။ သို့သော် ဂိုးသွင်းရန် အခွင့်အရေးက အိုမန်အသင်း ကပိုရသည်။ ပထမ ပိုင်းမိနစ် ၂၀ တွင် အိုမန် အသင်းက အဖွင့်ဂိုး စတင်ရရှိ သွားသည်။ ထိုက်ထိုက် တန်တော့ မဟုတ်။ စည်းကြပ်ဒိုင် လူကြီး၏ အားနည်းချက် ကြောင့်ဆိုလျှင် မမှားပေ။ အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင် က လူတိုင်းမြင်တွေ့ ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဘက် အသင်းကစား သမား သိသိသာ လူကျွံနေသော် လည်း စည်းကြပ်ဒိုင်မှာ နောက်ကျ နေသဖြင့် မမြင်တွေ့လိုက် သဖြင့် ဂိုးအဖြစ် ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာမှာ အရှက်ရစေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့ မြန်မာလူထုရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုထိုအချိန်မှစ၍မဟုတ်လျှင် မခံတတ် သော မြန်မာပရိသတ် က ဒေါသူပုန်ထကြတော့သည်။ ထိုနောက်ပွဲ ကိုဆက်ကစားရာ ပွဲချိန် ၃၈ မိနစ် တွင် အိုမန်အသင်း ၏ အဓိကတိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဥရောပ ကလပ်အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်သည့် ဘယ်လ်ဂျီယံ ကလပ် ချာလီရိုင်းတွင် ကစားနေသည့် အယ်လ်ဟော စနီအား မြန်မာ နောက်ခံလူများ ဖျက်ထုတ်ပုံ အနည်းငယ်ကြမ်း တမ်းခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဂျပန်လူမျိုး ကွင်းလယ်ဒိုင် ဖြစ်သူမှ ပင်နယ်တီ အဖြစ်သတ်မှတ် ပေးလိုက်ချိန် တွင် ပထမဂိုးပေးလိုက် ရစဉ်ကတည်းက ဒေါသူ ပုန်ထ နေသည့်ပရိသတ် များမှာ ထိန်းမနိုင်သိမ်း မရဖြစ်ကုန်တော့သည်။ ဆူညံ လာပြီး ကွင်းလယ်ဒိုင်ဖြစ်သူအား မေတ္တာ ၀ိုင်းပို့ကြကုန်သည်။ ယင်းပင် နယ်တီကို အိုမန်ကွင်း လယ်ကစားသမားဖြစ်သူ အယ်လ်ဂျ မီက ဂိုး အဖြစ်ပြောင်းလဲ လိုက်ချိန်တွင် မြန်မာ အသင်း၏ ၁၂ ယောက် မြောက် ကစားသမားတို့ ဥပဒေ ပြင်ပ ကကစား လာကြသည်။ ကွင်းအတွင်း သို့ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ခဲ၊ ရေသန့်ဘူး၊ ထမင်းထုပ်၊ ရေထုပ်၊ ကွမ်းတံတွေးဘူး၊ ကွမ်းတံတွေး ထုပ်များ အပြင် အချို့လည်း ကျင်ငယ် ရေထည့် ထားသောဘူးများ ဖြင့်ပါ ပစ်ပေါက် လာကြသည်။ ထိုအခြေအနေ ကြောင့်ကွင်း လယ်ဒိုင်ဖြစ်သူက ပွဲကို ရပ်နားထား ပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။ ၁၀ မိနစ်ခန့် ရပ်နားပြီး နောက်ပွဲကို ပြန်လည် စတင် သော်လည်း ဆိုးသွမ်း သည့်ပရိသတ်များ ကကွင်း အတွင်း လေးဖက် လေးတန်မှ အရာ ၀တ္ထုများ အဆက်အပြတ် ထပ်မံ ပစ်ပေါက်ခဲ့သ ဖြင့် ပွဲကို ရပ်နားထားရပြန်သည်။ မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော် ကိုယ်တိုင် မိုက်ခရို ဖုန်းဖြစ်လည်း ကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင် ကွင်းဘေးသို့သွားရောက် ၍ ပရိသတ်များကို တောင်းပန်ခဲ့ သော်လည်း မည်သို့မျှ ထူးခြားမလာခဲ့ဘဲ အိုမန် အသင်း၏ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှာ မြန်မာဘောလုံး ပရိသတ် ၏ပစ်ပေါက်လိုက်သော အရာဝတ္ထု ထိမှန်၍ ဦး ခေါင်းတွင် ဒဏ်ရရှိခဲ့သည်။ သို့အတွက် ကြောင့် ဒိုင်လူကြီးများ၊ ကစားသမား များနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ အားလုံး ကွင်းအတွင်းမှ ထွက်ခွာ သွားကြ ပြီး နားနေဆောင် သို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဦးဇော်ဇော်မှ ပြောကြား ရာတွင် ပွဲရပ်နား ချိန် ၂ နာရီကျော်လွန် သွားပြီဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ဘော လုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အရ ဘောလုံးပွဲဆက်ကစားရန် မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ် အားလုံးအတွက် မိမိတွင် သာတာဝန်ရှိ ကြောင်း၊ ပွဲပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လည်း ကျင်းပမည် မဟုတ်တော့ကြောင်းနှင့် ဒီနေ့ ၆ နာရီ တွင် မလေးရှား နိုင်ငံတွင်အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ၏ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ဖို့ရှိပေမယ့် ယခု မသွားဖြစ်တော့ ဘဲပျက်သွားပြီ ဖြစ်သည် ဟုဆို သည်။ မြန်မာဘောလုံး အသင်းဘက်သို့ ပင်နယ် တီပြစ်ဒဏ် ပေးခဲ့ခြင်းအပေါ် ၀ါရင့်အားကစား ကလောင်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးချစ်ဝင်းမောင် က “ဒီပင်နယ်တီ ကပေးလည်းရတယ်။ မပေး လည်းရတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးပါ။ ဒါပေ မယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင် ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော့လိုက် နာရမှာပါ”ဟု သူ့၏အမြင်ကို သုံးသပ်ပြသည်။ ယင်းအပြင် အားကစားကလောင်ရှင်တစ် ဦးဖြစ်သူ တာကာဟရှိ ကလည်း” ဒီပင်နယ်တီက မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် မှာဆိုရင် အသင်းပိုင်ရှင် တွေကြောင့် ကွင်းလယ် ဒိုင်တွေက ပင်နယ်တီမ ပေးကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာ ကစားသမား တွေအကျင့် ပါသွားတာ ဖြစ်မယ်”လို့ သူ၏အမြင် ကို ပွင့်လင်းစွာ လှစ်ဟပြသည်။ ယင်းမြန်မာ ဘော လုံးအဖွဲ့ချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးစိုးမိုးကျော် က “ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲမှာ ဒိုင်ဖြစ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်က အဓိက ကျတယ်။ ကွင်းအတွင်းမှာ ရေခဲ မုန့် တစ်ခုပြုတ်ကျ နေလို့အန္တရာယ် ရှိတယ် ဆက် မကစားဘူး ဆိုရင်ပွဲကို ရပ်ရမှာပါ။ အခုဆိုအဖွဲ့ ချုပ်ကို ဖီဖာက အရေးယူမှု ခံရနိုင်တဲ့အနေအထား မှာရှိနေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးရင် ဆိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ပရိသတ် တွေ အများကြီး လာအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ တယ်။ တစ်ချို့သော ပရိသတ်တွေရဲ့လုပ်ရပ် ကြောင့် အခုလိုဖြစ်ရတာပါ”ဟု ပရိသတ်များကို ကွင်းအပြင်သို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ရင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းက ဆက်လက်၍ “ဘောလုံး အားကစားမှမဟုတ်ဘူး။ အားကစားနည်းတိုင်း အတွက်ရော ဇာတ်ပွဲ၊ စတိတ်ရှိုး၊ ရုပ်ရှင် ကုန် ကုန်ပြော ရရင် မျက်လှည့်ပွဲ မှာပါ ပရိသတ်မရှိရင် မဖြစ်ပါဘူး။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ ဘောလုံးတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အတွက်လည်းပရိသတ်ရဲ့ တစ်ခဲနက်အား ပေးမှုက မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ကျွန်တော်တို့ အသင်းအတွက် အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ ဒီကမ္ဘာ့ ဖလားခြေစစ်ပွဲ မှာ မြန်မာ အသင်းသား တွေစိတ်ဓာတ်တက်ကြွပြီး ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်အောင် ပရိသတ် တွေ ကွင်းပြည့်ကွင်း လျှံလာရောက် အားပေး နိုင်ဖို့နဲ့ ကုန်ကျစရိတ် သက် သ က် သာသာ နဲ့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် အားပေးနိုင်ဖို့ ရိုးရိုးတန်းဝင် ပေါက်တွေ အားလုံးကို ပရိသတ် အတွက် အခမဲ့ဝင်ရောက် ကြည့် ရှုခွင့် ပေးခဲ့တာပါ”ဟုရှင်းပြသည်။ အားကစား ကလောင်ရှင် တာကာဟရှိက “ဒီပွဲအပ်ါပြော ရရင် တစ်အချက် သိက္ခာကျတာ ပေါ့ဗျာ။ အိုမန်လိုအသင်းနဲ့ ကန်ရ တာရှုံးရင်လည်း ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ပွဲ နိုင်ရင်လည်း ဘာမှာ မဖြစ်တဲ့ပွဲ ပရိသတ် တွေပေါ့နော်။ ပရိသတ် တွေလိုပြောရင် အကုန်လုံး ပါ သွားလိမ့်မယ်။ ရမ်းကားတဲ့ ပရိသတ်တွေ ဆိုးသွမ်း ပရိသတ် တွေပေါ့။ တိုင်းပြည်လည်း သိက္ခာ ကျတယ်။ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာကျ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် အတန်းရှိ တဲ့နိုင်ငံရယ်လို ဖြစ် မလာဘဲနဲ့ နိုင်ငံတကာ ပွဲတိုင်း ဒီ လိုဖြစ်နေတာ ကတော့ သုံးသပ် ဖို့လို နေပြီပေါ့။ ပြင်ဆင်ဖို့လဲ လို နေပြီပေါ့။ ဒီနေ့လိုဖြစ်နေတာ မျိူးက ၂၀၁၃ မှာ ဖြစ်များဖြစ် လိုက်ရင် တွေးတောင် မတွေးရဲ စရာပဲ။ ဒီနေ့ပွဲ သည် ၂၀၁၄ ကမ္ဘာဖလားပွဲ လို့ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ ဘာမှ မဟုတ် သေးတဲ့ ခရီး အဝေးကြီး လိုသေး တဲ့ပွဲ ဆီးဂိမ်းစ် လိုဟာမျိူးက ၂၀၁၃လည်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်လဲ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်မှ တစ်ခါ ပြန်ပြီးတော့ ကိုယ့်အိမ်ရှင်လည်း လုပ်ရမယ့်ပွဲမျိူးမှာ ဒီလိုသာဖြစ် လိုက်လို့ ကတော့ တွေးတောင် မတွေးရဲ စရာပဲ မဖြစ်အောင်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရ မလဲဆိုတာမျိူးကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်သင့် တယ်လို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ဘောလုံး အဖွဲ့ချူပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန် အရှိဆုံးက ဖီဖာပေါ့။ ဖီဖာက ဘယ်လိုသုံး သပ်မလဲ။ နောင် မဖြစ်အောင် ဒီဘက် က ဘယ်လိုတာဝန်ခံနိုင် မလဲဒီအပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။ ဖီဖာကသုံး သပ် တယ်ဆို ရင် ရင် နှီးတယ်၊ မရင်းနှီးဘူးဆိုတာကို ကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘောလုံး နှစ်သင်း ကန်တာ တစ်သင်းသင်း က နစ်နာရင် နစ်နာတဲ့ ဘက်က မနစ်နာရ အောင် ကာကွယ်ပေး ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။ ဒီတစ်ပွဲ တည်း မဟုတ်ဘူး။ ဟိုအရင် မျိူး မင်းထွန်းတို့ ကန်တုန်းက ယူ ၁၇ ချန်ပီယံ မလေးရှားနဲ့ ကန်တုန်းက လည်း ဖြစ်တာပဲ။ ၂၀၀၄ မှာ လည်းမြန်မာပရိသတ် က စင်ကာ ပူမှာ ဖြစ်တာပဲ။ ဒီတော့ ဒါတွေ ကမဖြစ်သင့် တော့ဘူး။ ဖျောက် ပစ်ရတော့ မှာပေါ့။ စီစီတီဗီ ထား တော့လည်း လုပ်မယ့် ပရိသတ် ကလုပ်မှာပဲ။ ဖြစ်ပြီးတော့ မှ ဖမ်း ရမှာ ဆိုတော့ ဘာထူးမှာလဲ။ စီစီ တီဗီ ကလည်း ဘယ်လောက် ထောင့်စေ့ အောင်ရိုက်နိုင်မလဲ။ စီစီတီဗီထဲ ပါတော့ရော ကိုယ့်က ဘယ်လို မိအောင်ဖမ်းမလဲ။ မရှိ တာ ထက်ရှိ တာကောင်းပေမယ့် ရှိတာ ကလည်းအရာ မရောက်ရင် ဘာလုပ် လို့ရမှာလဲ။ (ပရိသတ် ကို အလကား ၀င်ခွင့်ပေးတာ) အများကြီးဆက် နွယ်တာ ပေါ့လေ။ အလကား ၀င်လို့ရတယ်ဆို တာ ပရိသတ်ကို ကြည့်စေ ချင်တယ် ဆိုတာကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲတစ်ပွဲ ကို အလကား ပေးဝင် လိုက်ြပီဆိုတာနဲ့ အလကား လူတွေပါလာ လိမ့်မယ် နောင်ကို အလကားပေး ၀င်တဲ့ကိစ္စကိုပါ စီစစ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ နောင်ကို မဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမယ်ဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီး ပါတယ်။ ကစားသမားက နိုင်ငံတကာ ဒိုင်နဲ့ ကန်ရင် ကြမ်းရင်ကြမ်းသလို အ၀ါ၊ အနီ ပြတာ ခံရမယ်။ ကစား သမားကြမ်းလို့ အ၀ါအနီ ထိပြီဆိုရင် ကိုယ့် အသင်းပဲ ထိခိုက်တာပဲ။ တစ်ဘက် ကစားသမား နာတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တန်း နစ်နာတာက ကိုယ့်အသင်း ပဲ တခြားမကြည့်နဲ့ ၂၀၀၄ မှာပဲ ကြည့် စင်ကာပူ နဲ့ပွဲမှာ ခြေအသာ နဲ့ကစားနေတာ ကနေ အကျိုးမရှိဘဲဖြစ်သွား တာကိုပဲကြည့်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ကသိက္ခာ လဲရှုံးပွဲလည်းရှုံး။ တကယ် ကတော့ဒီပွဲက အတွေ့အကြုံယူတဲ့ပွဲပဲ ဖြစ်သင့်တာပါ။ အနိုင်အရှုံးကို အဓိကထားစရာ မလိုပါဘူး။ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း ၀င်မယ့် လူငယ်ကစား သမားတွေကို ကမ္ဘာ့ ဖလားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အရှိန်အ၀ါနဲ့ အတွေ့အကြုံ ယူရမယ့် ပွဲမျိူးလုပ် ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့”ဟု ရှင်းပြသည်။ ယင်းအပြင် ဘောလုံး ၀ါသနာရှင် တစ်ဦး ကလည်း “လက်မှတ်ခ တိုးတာကတော့ အနည်း အကျဉ်းတော့ သက်ရောက် ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေ မယ့် ဆိုးသွမ်း ပရိသတ်ကိုတော့ မတားနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လုပ် ရမှာက ဘောလုံးကွင်း နားမှာ ဘီယာ၊ အရက် ရောင်းချခွင့်ပိတ် ပေးရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ပြီး အရက်သောက် ထားတဲ့သူ တွေကိုလည်းဝင်ခွင့် မပေးသင့်ဘူး။ ဒါမှသက် ရောက်မှုရှိ နိုင်မယ်ထင်တယ်”ဟု သူ၏ထင်မြင် ချက်ကို ပြောပြသည်။ မြန်မာ ဘောလုံးကို အစဉ်တစိုက် အားပေး ခဲ့သူပရိသတ် တစ်ဦးကလည်း “စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ်စီအားနည်း ချက်ရှိနေတာ အမှန်ပါ။ အခုဖြစ်ရပ်မှာ မူးယစ်ပြီး သောင်းကျန်းခဲ့ တဲ့ပရိသတ်တွေ လည်းပါခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ ပွဲဆိုတော့ အရှက်ရ စရာပါပဲ။ ဒါပေ မယ့်မြန်မာ တွေရဲ့စိတ်ရင်း အမှန်က အခုလောက် မရိုင်းပါဘူး။ ချုပ်တီး ထားရတာ တွေများလို့ ဆိုး ဆိုးရွားရွား ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆ ပါတယ်။ တကယ် တော့ မြန်မာတွေ ဘောလုံးပွဲငတ်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ လက် ရွေးစင်အဆင့် နိုင်ငံတကာပွဲ ဘယ်နှစ်ပွဲကန်ခဲ့ သလဲ ဆိုတာမျိုးစဉ်းစား စေချင်တယ်။ အခု ထိုင်း၊ မလေးရှားလက်ရွေးစင်အသင်းတွေ ပရီးမီယား ကလပ် အသင်းတွေနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲ၊ ဖလားလု ပွဲတွေကစားနေကြတယ်။ မြန်မာ- အိုမန်ပွဲဆိုတာ သာမန် ခြေစစ်ပွဲ တစ်ခုပါ။ တောရက်စ် မပါသလို၊ ဒရော့ဘာလည်း မပါဘူး။ ပြောစရာဆိုလို့ ၀ီဂန်ရဲ့ နံပါတ်တစ် ဂိုးသမားအယ်လ်ဟာစီတော့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ အောင် ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ချက် မျိုးလည်းမထား ခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံး ချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ လာခဲ့ ကြတာပါ။ ကွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ပရိတ်သတ်ကို မဆို ထားနဲ့။ ကွင်းပြင်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ရော။ ခင်ဗျားတို့၊ ကျွန်တော် တို့မြင်တဲ့အတိုင်း ပဲ။ မြန်မာဘောလုံး ပရိသတ်တွေ တစ်ဖက်က စည်းကမ်းမဲ့လို့ အရှက်ရခဲ့တယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က လည်း သူတို့တွေကိုယ့် နိုင်ငံအသင်းရဲ့ ကစားပွဲ တစ်ပွဲအပေါ် ဘယ်လောက် အရူးအမူးဖြစ်နေလဲ၊ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် ဘယ်လောက် ဆာလောင် တောင့်တနေ လည်းဆိုတာတွေကို ထည့် သွင်းစဉ်း စားစေ ချင်တယ်” ဟု သူ့အမြင်ကိုပြောသည်။ နောက်ဆုံး ရရှိသည့် သတင်းများအရ မြန်မာ -အိုမန် ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ပွဲစဉ်တွင် ဖြစ် ပျက်ခဲ့သမျှ ဖြစ်ရပ်များ အား ဖီဖာက စုံစမ်းမှုများ စတင်ပြုလုပ် နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုနေ့က ဖြစ် ပျက်ခဲ့သမျှ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပွဲကြီးကြပ် သူ၏ အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများအား ဖီဖာ၏ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက စတင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ် လျက်ရှိပြီး ပွဲရလဒ်ကိုမူ ၂-၀ ဖြင့်ပင် အတည်ပြု သတ်မှတ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင်ပြည်တွင်း ၌ ဆိုးသွမ်း သောင်းကြန်း ခဲ့ကြသည့် ပရိသတ် အချို့အား တာဝန်ရှိသူများက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားကာ အခြား ဆိုးသွမ်း ပရိသတ်များကိုလည်း ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းများဖြင့် ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်လျက် ရှိနေကြောင်းသိရသည်။ ပထမပိုင်း မိနစ် ၄၀ တွင် ပွဲရပ်နားခဲ့ရ သည့် ထိုပွဲစဉ်၌ ဆိုးသွမ်း ပရိသတ်များကကွင်း အတွင်း သို့ အရာဝတ္ထု ပေါင်းများစွာတို့ဖြင့် ပစ် ပေါက် မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ထိုအထဲတွင် လေးခွလို အစရှိသည့် လက်နက်များ ပင်ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆပြီး အိုမန်အသင်း ၏ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မှာလည်း ပရိသတ်များ ၏ပစ်ပေါက်မှုကြောင့် ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် ပွဲကြီးကြပ်သူမှ လည်း ကွင်းအတွင်း ကျရောက် လာခဲ့သည့် ခဲများအား မှတ်တမ်း တင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး သွားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆိုးသွမ်းသည့်အပြု အမူများအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့ သူများ အား CCTV ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံမှတ် တမ်းများ ပြန်လည်ကြည့်ရှုကာ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ် နိုင်ရန်ကြိုးပမ်း လျက်ရှိနေပြီး လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိ သူများကစစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်လျက်ရှိနေသည် ဟု သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရပ် များကြောင့် ပွဲစဉ်အားဖျက် သိမ်း ခဲ့ရကာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အ နေဖြင့်လည်း ဖီဖာ၊ အေအက်ဖ်စီ တို့၏ အရေး ယူခြင်းခံရဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ် ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း အတွက် ငွေဒဏ်အားဖြင့် ဒေါ်လာငါးသောင်း အထိ အမြင့်ဆုံး ဒဏ်ရိုက်ခံ ရဖွယ်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်ဘောလုံး ပွဲစဉ်များအား အိမ်ရှင် အဖြစ်လက်ခံ ကျင်းပခွင့် နှစ်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအထိ ပိတ်ပင်ခံရ ဖွယ်လည်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် လာမည့် စက် တင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် AFC U – 19 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ လက်ခံ ကျင်းပခွင့် မှာလည်း မရေမရာ အနေအ ထားသို့ ရောက်လာခဲ့ပြီး အကယ်၍သာ လက်ရွေး စင်အသင်း၏ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ် များ သာမက သက် တမ်းအလိုက် ပွဲစဉ်အားလုံး အားပိတ်ပင်ခြင်း ခံရ မည်ဆိုပါက မလေးရှား ကဲ့သို့နိုင်ငံက အိမ်ရှင် အဖြစ် အစားထိုး လက်ခံ ကျင်းပဖွယ် ရှိကြောင်း လည်း အတည်မပြု နိုင်သေးသည့်သတင်းများ အဆိုအရသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်သည် နေရှင် နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင်ဗိုလ်စွဲသည့် ကလပ်များအား AFC Cup ပြိုင်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ခွင့် ရရှိရန် ကြိုး ပမ်းလျှက်ရှိရာ အစစအရာရာ အခြေအနေ ကောင်းမွန်လျှက်ရှိနေပြီး နောက်ဆုံး အဆင့်အိမ် ကွင်းများအား စစ်ဆေးမည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုနေ့ ဘောလုံးပွဲဖြစ် ရပ်များက အဆိုပါ အခွင့်အရေးအတွက် သက် ရောက်မှုလည်း ရှိနိုင်ကြောင်းကို မြန်မာဘော လုံးသတင်း များကို အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြသော soccormyanmar ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြ ထားသည်။ ထို့အတူ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ် ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်လည်း ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကြောင့် မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ၊ ကိစ္စ အားလုံးသည်ဖြစ်ပြီးခဲ့လေပြီ။ သို့သော် မြန်မာ ဘောလုံး လောကအတွက် ပြင်ဆင်ရန်၊ သင်ခန်း စားယူရန်များသည် တစ်မျိုးထက် တစ်မျိုး မရိုး နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းအပြင် ပရိသတ် ဆိုး တစ်ချို့၏လုပ်ရပ် ကြောင့် မြန်မာဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ စိတ်ပျက်နေပြီး ရာထူးမှ နုတ် ထွက်တော့မည်ဆိုသော သတင်းများ တပြိုင်နက် တည်း လိုလို ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် ထိုသတင်းများ အပေါ် မီဒီယာ ဒါရိုက်တာမှ မြန်မာဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်၏ တရားဝင် ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ တစ်ဆင့် ငြင်းဆို သွားခဲ့လေသည်။ နေရာတိုင်းတွင်၊ လူတိုင်းသည် သူ့နေရာနှင့် သူအသုံးဝင်ကြသည်။ ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲတွင်မှ မဟုတ် အခြားမည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တွင်မဆို ပရိသတ်ပါ မှရသည်။ လုထုပရိသတ်၏ စည်း ကမ်းရှိမှုမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးလှသည်။ ပရိသတ်ဆို သည်မှာလည်း မတစ်ထောင် တွေဖြစ်တာမို့ စုစည်းညီညွှတ် အောင်စည်းရုံးစွမ်းဆောင်ဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ် သလောက် အလုပ်ခက်သည်ဆိုသည်မှာ အထူး ပြောရန် လိုအပ်မည်မထင်။ လက်ရှိအခြေ အနေမှ အကောင်းဆုံး သာဓကပင်ဖြစ်မည်ဟုထင်မိသည်။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး လောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ အကောင်းဆုံးစွမ်း ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ဘောလုံး ပရိသတ်များ အားလုံး သိကြသည်။ သို့သော် ပရိသတ်များကို သူတစ် ယောက်တည်း နဲ့မထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်မှာ ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းလှသည်။ အဆင့်တန်းမရှိ ရိုင်းပြနေကြတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ တောင်းပန်နေသည့် မြန်မာအသင်းခေါင်းဆောင်မြန်မာ ဘောလုံးအသင်း၏ အောင်မြင်တိုး တက်ရေး အတွက် ၁၂ ယောက်မြောက် ကစား သမား၏ အရေးပါမှု၊ အခန်းကဏ္ဍကို လှစ်လှူရှု ၍မရတော့ပေ။ မြန်မာ ဘောလုံးအသင်း အဆင့် အတန်းမြင့် တင်ရန် လိုအပ်သလို မြန်မာဘောလုံး အသင်းရဲ့ ၁၂ယောက်မြောက် ကစားသမားဖြစ် တဲ့ ပရိသတ် ကိုလည်း အဆင့်မြင့်တင် ဖို့ ကြိုး စားရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။http://www.themyanmarpost.com/?p=9137
နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက် လုပ်စားလို့အကောင်းဆုံး = ကောလဟာလ
ဒီတစ်ခါအိပ်ရာက မထနိုင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ကြာသွားလဲဆိုရင် နံပါးနှစ်ဖက်မှာ ဘိုလို bedsore လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်ရာပွန်းနာတွေ ရလာတဲ့အထိပါပဲ။ သုံးလလုံးလုံး နေ့ရောညပါ အိပ်ရာထဲမှာပဲနေပြီး ညာဖက်နံတောင်းနဲ့ စောင်းအိပ်လိုက်၊ ဘယ်ဖက်နံတောင်းနဲ့စောင်းအိပ်လိုက်နဲ့သာ နေရတာကိုး။ စိတ်ပူရှာကြရေးနေကျဂျာနယ်တွေအတွက် စာမရေးနိုင်တော့ နယ်ပေါင်းစုံကစာ ဖတ်ပရိတ်တွေ ဖုန်းဆက်ကြ၊ စာရေးကြနဲ့ စိတ်ပူရှာကြတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ နီးတဲ့ဒေသက စာဖတ်သူများကတော့ လူကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းကြတယ်။ နဂိုက ဧည့်မပြတ်ရတာ ထက်တောင်ပိုပြီး အရောက်အလာများတယ်။ နေမကောင်းဘူးကြားတော့ စာပေသမား သတင်းသမားတွေကလည်း စိတ်ပူပြီး တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ရောက်ရောက်လာ ကြတယ်။ တချို့များဆို ၀ီရိယကောင်းလွန်းလို့ နေမကောင်းတဲ့ကြားက ပြုံးတောင်ပြုံးမိသေးတယ်။ စာရေးနိုင်ပြီလားဆိုတာ သိချင်လို့လာတာပါဆိုပြီး အိပ်ရာထဲလှဲနေတဲ့သူကို ထောင့်မျိုးစုံကလှည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်သူကရိုက်၊ ဗီဒီယိုရိုက်သူကရိုက်နဲ့ လုပ်ကြတော့ သတင်းသမားချင်း မဟုတ်လား။ သူတို့လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိဘဲဘယ်နေပါ့မလဲ။ မဂိုးသေးပါဘူးလူငယ်လေးတွေမို့ ဘာမှမပြောဘဲ ပြုံးရုံသာပြုံးနေလိုက်ပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ ''မဂိုးသေးပါဘူးကွယ်၊ တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် လုံးဝချုပ်ငြိမ်းပြီး ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေ၊ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် ပြည်သူတွေအားလုံး လိုလားတောင့်တနေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကို မမြင်ရမချင်း အကြာကြီးကို နေသွားဦးမှာပါ''လို့ ပြောနေမိတယ်။ အနိစ္စမသိ၊ တရားမရှိလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာမွေးပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ပြည်တွင်း စစ်ကြီးနဲ့ တစ်ပါတီ တစ်ဖွဲ့တစ်စည်း အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး နေထိုင်ခဲ့ရသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒါလောက်ကလေး လိုလားတောင့်တတာဟာ မလွန်လောက်ဘူးထင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ''စစ်ဆိုရင်မုန်းလွန်းလို့ ရေတောင် စစ်မသောက်ချင်ဘူး'' လို့ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောကြသလိုတောင် တစ်ခါတစ်ခါ ပြောချင်မိတယ်။ နှစ် ၆၀ ကျော် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအတွင်းမှာ တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့ ဦးလေးသားချင်းစစ်ဗိုလ်တွေ တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးသွားတာရှိသလို၊ ရဲဘော်ဖြူတွေထဲ ကွန်မြူနစ်တွေထဲ ရောက်သွားပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ ဆွေမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကြီးလာတော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ သူငယ်ချင်း စစ်ဗိုလ်တချို့ ကျဆုံးသွားကြသလို တောထဲတောင်ထဲရောက်သွားပြီး တိုက်ပွဲမှာ ကျသွားတဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်တာ၊ ဒီမိုကရေစီကို လိုချင်တာ။ အဆုံးအဖြတ်ပြုနိုင်လောက်တဲ့သတင်း ဇူလိုင်ကုန်ခါနီးတော့ ဧည့်သည် အ၀င်အထွက် ပိုများလာတယ်။ နည်းနည်း သက်သာသလိုမြင်ရရင် စကားပြောလာကြတယ်။ ရူးပတ်မားဒေါ့ရဲ့ မီဒီယာအင်ပါယာကြီး ကိစ္စအပေါ် ထင်မြင်ချက် မေးချင်လာကြတယ် ''ဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်ရောက်တော့ မားဒေါ့ကိစ္စတုန်းက အလိုက်သိစွာနဲ့ ဘာမှမမေးဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့တောင် မမေးဘဲမနေနိုင်ကြတော့ဘဲ ''ထင်မြင်ချက်လေး ပေးပါဦး''လို့ ပြောလာကြတယ်။ မားဒေါ့ကိစ္စလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်တော့ အရေးကြီးဆုံး ထိပ်တန်းသတင်းကြီး မဟုတ်လား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အကောင်းအဆိုး အဆုံးအဖြတ်ပြုနိုင်လောက်တဲ့အထိ အရေးပါတဲ့ သတင်းကြီးပဲလေ။ အစိုးရသစ်ရဲ့ ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံကြတဲ့ သတင်းပေကိုး။ ကောင်းတာတွေ့ရင် ကောင်းတယ်လို့ ရေးသလို၊မကောင်းတာတွေ့ရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ ရေးရတယ်။ အစိုးရသစ်ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံတာဟာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာသတင်းဖြစ်တယ် . . . သို့လော၊ သို့လော သူတို့အရေးတကြီးနဲ့ အလေးထားကြတာ မလွန်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း အိပ်ရာက မထနိုင်ပေမယ့် သတင်းမှန်သမျှကိုတော့ မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။ အစိုးရသစ်က ဦးအောင်ရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်တပ်ပြီး သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့ လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ သို့လောသို့လော တွေးနေကြခိုက်မှာ မထင်မှတ်ဘဲ အစိုးရသစ်ရဲ့ ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နှစ်ဦးတည်း တွေ့ဆုံမယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာကိုး။ ဒီတော့ ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ တစ်မျိုးသားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် အလားအလာကောင်းများ ဖြစ်နိုင်သလား။ စာ နဲ့ သတိပေးချက်ကို ပိုပြီးခိုင်မာစေဖို့ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ သတိပေးတာလား။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်ကြသလဲ စတဲ့စတဲ့ လဲပေါင်းများစွာ၊ လားပေါင်းများစွာကို မေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်။ ထင်မြင်ချက်မျိုးစုံ ''ထင်မြင်ချက်ပေးပါဦး'' ဆိုလာ သူတွေကို ထင်မြင်ချက်မပေးမီ အရင်ဆုံးအနေနဲ့ လာသမျှဧည့်သည်မျိုးစုံနဲ့ မီဒီယာသမားကြီးငယ်မျိုးစုံတို့ရဲ့ ပြောသံဆိုသံတွေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ ဆန္ဒစွဲမှန်းဆမှု (wishful speculation) တွေကို စုစည်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီလိုတွေ့ရတယ်။(၁) ဘန်ကီမွန်းလို ဒါဟာ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းစဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကောင်းမြင်ရှုထောင့်က ကြည့်တဲ့သူများ။(၂) အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် ပြောသလို၊ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါလောက်နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး။ လက်တွေ့ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ 'ထောက်ကွက်' လုပ်သူများ။(၃) အမေရိကန်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေက ပရက်ရှာ(ဖိအား) ပေးနေတာတွေ လျော့ကျသွားစေဖို့နဲ့ အာဆီယံမှာ ဥက္ကဋ္ဌနေရာရယူဖို့အတွက် လှည့်ကွက်သက်သက်မို့ 'အရာကြီးနဲ့ဘာဘူကြီး'လို ထူးမခြားနားပါပဲလို့ ဆိုသူများ။(၄)တွေ့ဆုံကြတဲ့ ဘက်နှစ်ဖက်မှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိနေရှိနေ၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ကျောခိုင်းနေတာထက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံတာက ပိုကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ထောက်ခံသင့်တယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကနေ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင် အားလုံးဝိုင်းပြီး တွန်းအားပေးရမယ်လို့ ဆိုတဲ့သူများ။ အကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ဖို့ အဓိကအနေနဲ့တော့ အဲဒီလေးမျိုးလေးစား တွေ့ရတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ ထိတွေ့မှု အများဆုံးရရှိနေတဲ့ မီဒီယာကြီးတွေက 'အကျိုးတော်ဆောင်' ၀င်လုပ်ပေးရင် မကောင်းဘူးလားလို့ ပြောလာသူ နှစ်ဦးသုံးဦးလည်း ရှိသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ လူနည်းစုလေးမို့ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့လေးမျိုးလေးစားထဲ ထည့်မတွက်ဘဲ ချန်လှပ်ထားခဲ့တာပါ။ မီဒီယာကြီးတွေလို့ပြောတော့ ကိုယ်နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတာကြောင့် ဖြေတဲ့အခါမှာတော့ ထည့်သွင်းဖြေကြား သွားပါမယ်။ ကြိုတင်ပြောပါရစေ ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ ပြောသူများထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါသလို၊ မီဒီယာသမားတွေလည်း ပါပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား မီဒီယာသမားမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုးလူငယ်တွေလည်း တော်တော်များများ ပါကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုမှာ ပါဝင်ပတ် သက်နေသူမဟုတ်ဘဲ သတင်းမီဒီယာသမား သက်သက်သာဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားလို 'ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာ' (analyse) စဉ်းစားတာမျိုး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ သုံးသပ်ဝေဖန်ချက် ရေးသလိုမျိုးသာ ဖြေတတ်တယ်။ ဒါကြာင့် နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ဝေဖန်ချက် စစ်တမ်းတစ်ခုလို မကြည့်ဘဲ၊ ပုံနှိပ်ဖော်ပြဖို့ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ထဲမှာရေးတဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ်နဲ့သာ ရှုမြင်ပါလို့ ကြိုတင်ပြောထားပါရစေ။ မင်္ဂလာသတင်း သတင်းသမားဆိုတာ သတင်းဖြစ်လာရင် ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်း အပိုအလိုမရှိ အမှန်အတိုင်း အရှိအတိုင်း ရေးရတယ်။ သုံးသပ်ဝေဖန်ရာမှာလည်း ကောင်းတာတွေ့ရင် ကောင်းတယ်လို့ ရေးသလို၊ မကောင်းတာ တွေ့ရင်လည်း မကောင်းဘူးလို့ ရေးရတယ်။ အစိုးရသစ်ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံတာဟာ ကောင်းတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာသတင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်။ ဒီတွေ့ဆုံမှုမတိုင်မီက အာဇာနည်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေ ချီတက်အလေးပြုဖို့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူချင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂံဘုရားဖူးခရီးစဉ်မှာလည်း တာဝန်ရှိသူချင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တွေ့ဆုံခြင်းရလဒ် အာဇာနည်နေ့ကိစ္စရော၊ ပုဂံဘုရားဖူးကိစ္စပါ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သာမက ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကပါ ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပေမယ့် မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စမျိုး တစ်ခုမှ ဖြစ်ပေါ်မလာခဲ့ဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ဒါဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြရတယ်။ ကမ္ဘာမှာအစိုးရသစ်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း တက်သွားစေတယ်။ အစိုးရသစ်ဟာ လုံခြုံရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကသာ ကြည့်ပြီး လုံခြုံရေးအတွက် စစ်တပ်တွေ ရဲတပ်တွေ အများအပြားချထားခြင်းမပြုဘဲ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကပါ ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး ပါးပါးနပ်နပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် ဒီလိုရလဒ်မျိုး ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အာမခံချက်ပေး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတွက် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်၊ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့်၊ အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ဆန္ဒပြ စာတမ်းလှည့်လည်ခွင့်တို့ကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ထည့်သွင်းရေးသားပြီး အာမခံချက်ပေးထားကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာလည်း ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ မထူးဆန်းပါဘူး။ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားလမ်းမတွေပေါ်မှာ လူ လေးငါးဆယ်လောက်ကနေ လေးငါးရာနဲ့ လေးငါးထောင်ထိဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကိုင်ပြီး စီတန်းလမ်းလျောက်နေကြတာတွေ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ နေ့တိုင်းတွေ့နေကြရတာပါ။ ဆန္ဒပြသူ ကပြ၊ လမ်းသွားလမ်းလာတွေက သွားမြဲလာမြဲ၊ ရုံးသူရုံးသားတွေက ရုံးတက်မြဲပါပဲ။ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း သူတို့ပြစရာရှိတာပြ၊ တောင်းဆိုချက်ပေးစရာရှိတာတွေပေးပြီး အေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားကြတာ ပါပဲ။ ပြောမယုံကြုံဖူးမှသိ လုံခြုံရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းက မကြည့်ဘဲ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကပါ ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ ရလဒ်ကောင်းရခဲ့တဲ့ 'ဖြစ်ရပ်ဆန်း' တစ်ခု အာဇာနည်နေ့က ကြားသိခဲ့ရတယ်။ မြောက်ဒဂုံက လူပေါင်း နှစ်ဆယ်အစိတ်လောက်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ ချီတက်အလေးပြုမှာကို သွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့အတွက် စီတန်းထွက်ခွာလာကြတယ်။အဲဒီမှာ ''မပြောမယုံကြုံဖူးမှသိ'' လို့ ပြောရမယ့်ဖြစ်ရပ်ကို တွေ့ရတယ်။ စီတန်းချီတက်လာသူတွေကို လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေက ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့ သူတို့သွားလိုရာအရောက် ကားတွေပေါ်တင်ပြီး လိုက်ပို့လိုက်သတဲ့။ ကဲအဲဒါထက် ဆန်းတဲ့သတင်းရှိသေးရဲလား။ ဒီလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ နမူနာကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေလို့ အောက်မေ့လိုက်ရတယ်။ ဗျူဟာတွေလိုတယ်သတင်းသမားတစ်ယောက် အနေနဲ့မြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်းပြောတာဖြစ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့ကိစ္စ မဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စကို ပြောလို့မရပါဘူး။ အစိုးရက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ သိအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စက နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ သတင်းသမား အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာက မဟာဗျူဟာတွေ၊ နည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တော့ တစ်ဖက်သားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တစ်ဖက်သားရဲ့အခံစိတ်ဓာတ်ကို အသေးစိတ် လေ့လာတွက်ချက်ပြီး မှန်းဆရတယ်။ အဲဒီလို မှန်းဆရာမှာ မှန်ကန်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ 'ဆန္ဒစွဲမှန်းဆချက်' (wishful speculation) မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက ပုဂ္ဂိုလ်အများစု မှားလေ့ရှိတဲ့ အမှားမျိုးထပ် မမှားစေဖို့ သတိထားသင့်တယ်။ အမေရိကန်နဲ့အီးယူက ဖိအားပေးလို့ အာဆီယံက 'ပရက်ရှာ' ပေးလို့ အစိုးရက လိုက်လျောလာတာဆိုတဲ့ အမြင်ဟာ အင်မတန်မှားယွင်းတဲ့ အမြင်ဖြစ်တယ်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်နီးပါး လက်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အချက်ကတော့ မြန်မာအစိုးရဟာ ဘယ်သူ့ဖိအားကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်။ သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်ရဲ့ ဖိအားကိုတောင် အရေးမလုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရဟာ သူ့မိန်းမ ဟီလာရီလို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းလောက်ကို ဂရုစိုက်နားထောင်မှာတောင် မဟုတ်ပါဘူး။အပ်နဲ့ ထွင်းလို့မရအရေးကြီးတာက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ခံ့ညားရိုသေလောက်တဲ့ အင်အားရှိမှ အများက လေးစားမှာဖြစ်တယ်။ သတင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်စိထဲမှာ လောလောဆယ်မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ သတင်းတွေက ကြာရှည်လစ်လျူရှုထားရင် 'အပ်နဲ့ထွင်း' ရုံနဲ့ မရတဲ့အခြေအနေအထိ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသအားလုံးလိုလိုမှာ စစ်ပွဲတွေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်လာနေတာတွေဟာ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးလှတယ်လို့ သဘောရတယ်။ စိတ်မချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်သား ကျဆုံးလည်း မြန်မာပဲ။ ကေအိုင်အေကကျလည်း မြန်မာပဲ။ ဒီကေဘီအေနဲ့ ကေအင်န်ယူကသေလည်း မြန်မာပဲ။ ရှမ်းဘက်ကကျလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။ ကိုယ့်အချင်းချင်း တိုက်နေသတ်နေရတာ ဘာကောင်းလို့လဲ။မျက်နှာမလှတဲ့ကိစ္စခုချိန်မှာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံးက သေနတ်သံတွေရပ်စဲပြီး အသေအပျောက် သတင်းတွေ မကြားရတော့ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြစေချင်တယ်။ နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ အစိုးရအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာမလှဖြစ်နေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် လူပေါင်းနှစ်ထောင်နီးပါး ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒီလို ထိန်းသိမ်းထားမှုတွေဟာ အစိုးရအတွက် မျက်နှာမလှဖြစ်ရုံသာမက တိုင်းပြည်အတွက်လည်း စွမ်းအားတွေ အဟောသိကံဖြစ်ရာရောက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ကယ်တင်ရေးကိစ္စ၊ လယ်သမားတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လယ်မလုပ်နိုင်ကြတော့ဘဲ မြို့တက်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြစ်ကုန်တဲ့ ကိစ္စ၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဘက် ရောင်းစားခံနေရတဲ့ကိစ္စ၊ ချမ်းသာသူတစ်စုက ပိုပိုချမ်းသာနေပြီး ဆင်းရဲသူတွေက ပိုပိုပြီး ဆင်းရဲလာနေတဲ့ကိစ္စ၊ စတဲ့စတဲ့ ကိစ္စတွေက မနည်းလှဘူး။၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံရာကနေ ဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကို ရောက်ရင်တောင် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတွေ တောင်လိုပုံနေတယ်လို့ ဆိုချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် တွေ့ဆုံပွဲကနေ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာအောင် အားလုံးဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားကြဖို့ မြန်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ဆက်ရေးပါဦးမယ်လူထုစိန်ဝင်း
ပြည်ပမှာ ဒီမိုကရေစီရနေတဲ့ တို့ ရွှေမြန်မာတွေ (၃)
Source : http://drchatgyi.blogspot.com/2011/07/blog-post_10.html
KIA အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သောက်ပေါဖြစ်အော...
ကချင်သောင်းကျန်းသူ KIO, KIA မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းအတွက် လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ...
နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက် လုပ်စားလို့အကောင်းဆုံး = ကေ...
မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကျော်ပေးဖို့ အမေရိကန် ကမ်းလှမ်း
[image: Photo: မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကျော်ပေးဖို့ အမေရိကန် ကမ်းလှမ်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတာကို အားပေးတဲ့အနေန...
AEC အတွက် အရှိန်ယူနေတဲ့ မွန်ဒေသကုန်သည်ကြီးများ
ဒေသတွင်း မကြာမီစတင်တော့မည့် အာစီယံစီး ပွားရေးအသိုက်အ၀န်း (AEC) မတိုင်မီ ထိုင်းနိုင် ငံနှင့်ကုန်သွယ်ရာတွင် မြန်မာဘက်မှ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ...